Z@!'s Life: NMFA Scholarship 2013
. . ပင်မ စာမျက်နှာ. .
My thoughts, my inspirations and yes my life . . . . .
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် နော်ဝေပညာသင်ဆု ထပ်ခေါ်နေပါပြီ။ အယောက် ၄၀ ခေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ကြေငြာချက်ပါ။ မြန်မာလိုပြန်မရေးပေးနိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Myanmar Egress မှာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။
Application Form ကို ဒီအောက်က လင့်မှာ သွားယူနိုင်ပါတယ်
ပြီးတော့ အောက်က သူရေးထားတဲ့ကြေငြာချက်လေးတွေကိုလဲ သေချာဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
NFMA SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS FROM MYANMAR for Asian Institute of Technology August 2013 www.ait.asia
Recognizing that education is essential for sustainable development, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs is offering scholarships to eligible Myanmar citizens for post-graduate studies at the Asian Institute of Technology. Through this scholarship program, the Royal Norwegian Government seeks to contribute to capacity development in all relevant sectors for the sustainable transformation of Myanmar intoamodern Nation that builds its own sustainable future.
The scholarship provides support for students to completeaMaster degree at the Asian Institute of Technology. Specifically, it provides for:
Tuitions and Registration Fees for Pre-bridging in Yangon and Bridging course, Master’s Degree Programs (4 semesters in AIT)
Monthly bursary and accommodation costs for Pre-bridging, bridging and master’s degree programs
Visa fees, medical insurance, book/printing/photo copy allowance, research grant
Return air ticket for Yangon-Bangkok-Yangon
Have completedaBachelor degree fromarecognized university of good standing and reputation, withaGPA of at least 2.75 out of 4.0 or equivalent.
Demonstrate proficiency in spoken and written English (IELTS 4.5 or equivalent or AITEE)
Be below 40 years of age at the time of enrolment (August 2013)
Should have at least 1 year of working experience
Demonstrate the motivation and capacity to successfully completeauniversity program
Demonstrate the motivation and capacity to contribute to the development and capacity building of Myanmar
Scholarships are awarded on the basis of academic record, application form, references, English language test and interview andapersonal statement and essay indicating the applicant’s English language skills and capacity for university education as well as their commitment to the development of the country. Equity in terms of age, ethnicity, location and gender will be taken into account.
Obtain the NFMA/AIT scholarship Application form online from:
If you cannot download the form via this link, you can obtainahardcopy of the form from one of the addresses below:
Complete the NFMA/AIT Scholarship Application Form, and also include:
Copy of your academic certificate/transcript
A personal statement (English language, max. 400 words)
Names of two (2) referees: one,ateacher or academic advisor familiar with your academic capacity or your employer the otheraresponsible adult, other thanafamily member, who knows you well
Email application documents to: admissions@ait.asia
If you don't have regular access to the internet, you can submit your application to one of the addresses below
The closing date for receipt of applications is 15th February 2013.
You will be contacted by the NFMA/AIT scholarship selection team for the next steps in the selection process only if you are shortlisted by the AIT schools to which you apply
58 Moo 9, Km. 42. Paholyothin Highway
Phoen:+66 (0) 524 5031-33
Fax: +66 (0) 524 6326
Daw Hla Hla Win Head of English Department
Myanmar Egress No. 35, Corner of Kyaik Wine Pagoda Road and Min Dhamma Road,
Mayangone Township, Yangon, Myanmar Phone : +95 1 656840,656841, 665482 ext: 103 Mobile: +959 4485 37757 www.myanmaregress.org
NOTE: Please attach the personal statement (400 words) andacopy of your academic certificate (if possible transcript)
You will be required to submit all the documents, academic records, transcripts and referee letters and other proof of the information provided above if short-listed.
Posted by Z@! at 1/17/2013 02:42:00 pm
Thanks for visiting my blog. Wish to see you around.
လာရောက် လည်ပတ်သူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိ ပါသည်။
ကျွန်တော့် အကြောင်း About Me
Love music, like seeing films but hate soap operas. Try to write sometimes and this blog is an approach to describe my feelings, my inspirations and somehow my life. သီချင်းနားထောင်ရတာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ကြိုက်ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကြည့်ရမှာကျ ပျင်းပြန်ရော။ တစ်ခါတစ်ခါ စာရေးချင်ပေမယ့် မရေးတတ်လို့ ဘယ်က စရေးရမှန်းမသိ။ ဒီ ဘလော့ဂ်လေးကတော့ ကျွန်တော့် စိတ်ကူး ခံစားချက်တွေကို ထွက်ပေါက်ပေးဖို့အတွက် လက်တည့်စမ်းထားတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။
အမှာစကား Leave Message
Z@! Life ကို Facebook မှာ Like လုပ်ပြီး တင်သမျှ ပို့စ်တွေကို ဖတ်မယ်
visitor counter WILLIAM HILL CASINO william hill casino ONLINE CASINO IN HONG KONG online casino paypal
ကျောက်စီပန်းချီ Gems Art
ကြုံတုန်းကြုံခိုက်လေး မိုးကုတ်က ကျောက်စီပန်းချီအကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီကျောက်ပန်းချီလုပ်ငန်းက ၁၉၉၈ - ၉၉ လောက်မှာ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ...
ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ပွဲ (ရန်ကုန်)
Blog လေးကို လုပ်ထားတာတော့ ကြာနေပြီ။ ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ ဘာရေးရမှန်းမသိသေးတာရယ် blog ကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမှန်း မသိသေးတာရယ်ကြောင့် မရေးဖြစ်ဘူး။ ကဲ ...
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် နော်ဝေပညာသင်ဆု ထပ်ခေါ်နေပါပြီ။ အယောက် ၄၀ ခေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး တင်ပေးရ...
ကျွန်တော်နှင့် မသက်ဆိုင်သော နေ့
ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ မတွေ့ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတော့ စကားတွေက တော်တော်နဲ့ မပြတ်နိုင်ဘူး။ ပြောစရာ အကြော...
ကိုမေမြို့မိုးရဲ့ တဂ့်ပို့စ်လေးပါ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက်နေ့က မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ရဲ့ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုကို စီရင်ချက်ချတယ်။ အမှ...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကနေပြီးတော့ GSM ဖုန်းတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့လ နှောင်းပိုင်းလောက်ကစပြီး ချပေးခဲ့ပါတယ်။ နယ်တွေက အရင်စရောင်းပြီးတော့ ရန်ကုန်နဲ...
ဒီပို့စ်ကို တင်ရင်ကောင်းမလား မတင်ဘဲနေရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားရတာ တော်တော် ခေါင်းစားပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း တင်လိုက်မယ်ကွာလို့ ဆုံးဖြတ်ပြ...
AIT အတွက် ပြင်ဆင်ထားရန်များ
AIT အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာ သိချင်တဲ့သူများအတွက် AIT မှာ ကျောင်းသုံးကျောင်းရှိပါတယ်။ School of Technology, School of Environm...
ဒီနေ့ဆို နင့်မွေးနေ့ပဲ။ ဘယ်နှနှစ်ပြည့်ဆိုတာကိုတော့ ငါမပြောတော့ပါဘူး။ နင်စိတ်ဆိုးနေမှာစိုးလို့။ J ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါေ...
လက်မှတ်နှစ်စောင် မေတ္တာလက်ဆောင်ရထားတယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက။ စိုင်းစိုင်းကို လက်ဆောင်အဖြစ် လာပေးပါတယ်။ တစ်သောင်းခွဲတန် နှစ်စောင်ဆိုတော့ သုံးသေ...
Blog ပေါင်းစုံက Post တွေ
ဖတ်ဖြစ်တာလေးတွေ Blog List
သူတို့ဆီမှာ ဒါတွေက ဒီလိုရှိတယ်
အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရက နိုငျငံတဝနျး အရေးပျေါအခွအေနကွေညော - အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ ကနပွေီးတော့ ဒီကနေ့ စကျတငျဘာ၇ရကျမှာနိုငျငံတဝနျး အရေးပျေါအခွအေနဆေိုပွီး ယာယီသမ်မတ ဒူဝါလရှီးလရဲ့ မိနျ့ခှနျးပွောဆိုမှုနဲ့အတူ ကွညောခကျြ...
Copyright (c) 2011 Z@!'s Life. Designed by Blogger Templates - reliable web hosting, Free Wordpress Themes, Tech Blogger Templates